भर्चुअल कक्षा कोठा - सजिलो बहु प्रदर्शन - डिजिटल साइनेज सफ्टवेयर
नवीन सुविधाको उपयोग कक्षा कोठा सुविधा को उपयोग गर्न को लागी।
अनलाइन शिक्षाको भविष्य
लचिलो, अन्तर्क्रियात्मक, र पहुँचयोग्य भर्चुअल शिक्षा सुविधा।
Succinct सजिलो बहु स्क्रीन प्रदर्शनहरू कुनै पनि अनलाइन शिक्षा आवश्यकता अनुरुप अनुकूलन योग्य छन्। कुशल कार्य र तत्काल संचारको लागि प्रशिक्षकहरूको स्क्रीनहरूमा सन्देशहरू कास्ट गर्न सजिलो मल्टि-डिस्प्ले प्रयोग गर्नुहोस्। डिजिटल ब्रह्माण्डमा हराएको जानकारी बिर्सनुहोस् - सजिलो मल्टि डिस्प्ले प्रत्येक स्क्रिनलाई अनुकूलन गर्न र अनुदेशकहरू र विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरूको लागि विशिष्ट प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
रेकर्ड, संचार, र वास्तविक समय मा विश्लेषण। तपाईंको भर्चुअल कक्षा को लाभ उठाउनुहोस् र उद्योग नवीनता मा एक पार्टनर बन्नुहोस्! हाम्रो टोलीसँग छलफल गर्नुहोस् कि कसरी तपाइँ आफ्नो भर्चुअल कक्षा कोठाको आवश्यकता अनुरूप इजी मल्टि डिस्प्ले अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ!
भर्चुअल कक्षा कोठाहरू डाउनलोड गर्नुहोस्तत्काल पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्
लचिलो, अन्तर्क्रियात्मक, र स्वीकार्य
सुविधाजनक र विद्यार्थीहरूले अग्रणी-धार प्रविधि प्रयोगबाट फाइदा लिन्छन्। सजीलै जानकारी पठाउन, वास्तविक-समय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न र आकर्षक कुराकानीहरू सिर्जना गर्न सजिलो Muti-प्रदर्शन प्रयोग गर्नुहोस्।
अनन्त ग्राहक अनुकूलन अवसरहरू
तपाइँको भर्चुअल कक्षा कोठाको आवश्यकताहरु को लागी व्यक्तिगत छ कि एक बहु स्क्रीन प्रदर्शन बनाउनुहोस्! हामी एक प्रदर्शन विकसित गर्न सक्षम छौं जुन प्रत्येक ग्राहकको आवश्यकतामा व्यक्तिगत रूपमा राखिएको छ।
नेभिगेट गर्न सजिलो
सजिलो मल्टि डिस्प्लेको साथ उठ्नका लागि तपाईलाई टेक्च गुरु हुन आवश्यक पर्दैन। हाम्रो सजिलो ईन्टरफेस को उपयोग गर्न को लागी प्रयोगकर्ता चरण-दर-चरण प्रक्रियाहरू मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ, तपाईंलाई बाटोको सबै सही प्रश्नहरू सोधेर।
हामी अझै प्रयोग गरिरहेका थियौं
कागज विज्ञापनहरू जुन खास अप टु डेटमा छैन, यसको मतलब सम्भावित ग्राहकहरू रातको समयमा हाम्रो विज्ञापनहरू पढ्न फोनहरू लिन बाध्य भएका थिए। EMD का साथ, हामीसँग एक गतिशील प्रदर्शन र विज्ञापनहरू छन् जुन हाम्रो एजेन्सीको स्थितिसँग मेल खान्छन्।
घर जग्गा एजेन्ट, गेन्ट र ब्रसेल्स
हामी ग्रेनोबलमा हाम्रो एस्केप कोठामा उपलब्ध नयाँ खेलहरू देखाउन सजिलो मल्टि डिस्प्ले प्रयोग गर्दछौं। यो हाम्रो ग्राहकहरु संग दोहोर्याउने व्यवसाय सिर्जना गर्न मा एक महत्वपूर्ण तत्व हो।
एस्केप कोठा, ग्रेनोबल
हामीसँग डिजिटल कक्षा कोठा समाधान सजिलो छ।
कार्यमा सजिलो बहु प्रदर्शन हेर्न चाहनुहुन्छ?
नि: शुल्क डेमोको व्यवस्था गर्न हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, वा हाम्रो टेक्निकल टीमबाट प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुहोस्।
हाम्रो आभासी कक्षा कोठा सूचना प्याक डाउनलोड गर्नुहोस्! >